Votsotra tamin’ny Panama ny fandraisana ny lalao Bolivariàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2010 2:19 GMT
Vakio amin'ny teny English, اردو, Español
Voatonon'ny Mpanoman-dalao fanatanjahantena Bolivariana (ODEBO) hampiantrano ny faha-XVII ny Lalao Bolivariana hontontosaina amin'ny 2013, tamin'ny volana mey lasa teo i Panama. Izany no vaovao lehibe ho an'ny firenena, izay tsy nampiantrano intsony ity lalao ity hatramin'ny 1973 [es]. Saingy noesorin'ny fifandaminana tsy hampiantranoan'i Panama indray io lalao io. Tamin'ny 20 Oktobra, The Panama Digest no namoaka hoe:
Ao anatin'ny tatitra nataon'i Kathyria Caicedo ao amin'ny vohikalam-baovao Telemetro [es] no hanazavany fa:
Efa voambara any amin'ny fampitam-baovao mahazatra any Panama sy any amin'ny vohikalam-baovao iraisam-pirenena sasantsasany any moa ny vaovao sy ny setriny avy any amin'ny manampahefana; Saingy efa misy moa ny nataon'ny mpikirakira ny Twitter tamin'ny fampielezana ny vaovao sy ny fahafaha-mitaratra ny ambiansy tamin'ny fandrenesana azy. Hoy i Carol Carito (@carolcarito) :
Nambaran'i Noel David Ortega (@noelpty):
Hafa indray ny fomba fijerin'i Sr Criticón (@SrCriticón):
Nila fananganana fotodrafitrasa goavana i Panama mba hamaliana ny filana rehetra takian'ny lalao. Tamin'ny volana aogositra i Rogelio Adonican, Panama America [es] no nilaza “Inona no mety ho azon'i Panama amin'ny Lalao?,” izay namintinany ny tombotsoa, araka ny filazan'ny mpikarakara azy, ho azon'ny firenena ka iray amin'izany ny fototrafitrasa. Nomarihan'ny lahtsoratra ihany koa ny tombony ho an'ny orinasan'ny fizahantany sy ny haizatra mety ho azon'i Panama raha nandrindra hetsika manana hadiry toy ireny izy.
Mora ny mahazo ny tsinapan'i Yadisel Buendia (@yadiselbuendia) niteny hoe: